I-Studio ku-Croftville Road - I-Airbnb
I-Studio ku-Croftville Road
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Lynn
U-Lynn Ungumbungazi ovelele
Woza uzojabulela okwakwakhelwe isitudiyo samaciko ekuqaleni futhi kwaguqulwa kwaba indawo yokuhlala ethokomele evumelana nezilwane ezifuywayo. Lesi situdiyo siyindawo evulekile ye-800-sq ft enezibani ezikhanyayo ekhishini nasendlini yokugezela, namafasitela abuka iLake Superior. Sitholakala ku-Croftville Road, abantu bendawo abawubiza ngokuthi "Walkers Road" - ithrafikhi ethule futhi ilungele ukuhambahamba nje nomndeni wakho kanye nemidlwane. Indawo yethu ethokozisayo iza ne-balcony kanye nokufinyelela kwedesika echibini nasogwini.
Siyazithanda izilwane ezifuywayo . Lolu lwazi lubaluleke ngendlela efanayo kubanikazi bezilwane ezifuywayo abahambayo kanye nalabo abazwelayo nabadinga ukubheka kwenye indawo.
Uma uhamba nesilwane esifuywayo, sicela uqaphele ukuthi izilwane ezifuywayo kufanele zifakwe endlini uma uhlela ukuzishiya eSitudiyo ngaphandle kwakho. Nginenqubomgomo egcwele yezilwane ezifuywayo etholakala ku-House Manual uma ubhukha. Futhi nakuba ingekho inkokhiso eyengeziwe yesilwane esifuywayo, sicela nje ukusicela usazise uma sizokujoyina lapho ubhukha.
Sinekhishi elincane eliphelele njengoba lidingeka ukuze uhlale! Ikhishi lihlanganisa ifriji, isitofu esisha (ibanga likagesi nohhavini omncane), i-microwave, i-keurig coffee maker, i-instant-pot, i-Crock-pot, ne-hot plate. Kukhona umgodi wokucisha umlilo owela umgwaqo ongawujabulela ngezinkathi ezingezona zasebusika. Siphinde sibe nomgodi ophathwayo wokucisha umlilo ongawusebenzisa Endleleni yokungena uma umlilo uyinto yakho. Kukhona indawo yokuhlala enhle ongahlala futhi ujabulele ichibi entwasahlobo, ehlobo, nasekwindla noma uze uthathe izithombe zeqhwa eliwela echibini ebusika! Qaphela ukuthi idekhi itholakala endaweni engalinywanga ebusika, ngakho-ke letha amabhuzu akho eqhwa!
I-Studio inazo zombili igumbi lokugeza elinosinki ogcwele kanye nendlu yangasese ehlukile kanye nosinki ovumelana nemvelo. Lokhu kuhle ezivakashini eziningi.
Sinombhede wendlovukazi onesistimu yombhede wosuku. Imibhede engamawele iwumbhede wosuku onombhede we-trundle ofakwe phakathi futhi ugcinwe ngaphansi ukuze wonge isikhala. Umatilasi womoya wendlovukazi nawo ugcinwa ekhabetheni kuze kube yilapho kudingeka.
Umbhede omkhulu ongu-1, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, imibhede yomoya engu- 1
Igceke elingemuva Okwabelwene ngako
Sitholakala cishe amakhilomitha angu-2 NE yedolobha iGrand Marais ukusuka ku-Highway 61, ku-County Rd 87 / Croftville Road.
Siyazihlola Sizotholakala kuwe nganoma imiphi imibuzo noma izidingo ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Sicela wabelane uma ukuhlala kwakho kuwumcimbi okhethekile. Sithanda ukuhlanganyela emgubhweni wakho.
Uma ufisa iseluleko mayelana nemisebenzi yethu yasendaweni ngicela ungazise uma ngingakwazi ukusiza.
Sicela wabelane uma ukuhlala kwakho kuwumcimbi okhethekile. Sithanda uk…
ULynn Ungumbungazi ovelele